January 6, 2020 - ThutaStar
January 6, 2020 Thuta Star 0
လက် ရှိအချိန်မှာ မြန်မာပြည်မှာ ဆောင်းရာသီကို ခံစားနေရတာဖြစ်ပေမယ့် ရာသီဥတုဟာ ပူလိုက်အေးလိုက်နဲ့ ဖြစ်နေပါတယ်နော်။ အေးချင်တဲ့ အချိန်မှာလည်း ပိုအေးလာတတ်သူသလို ၊ အအေးဓာတ်လျော့ပါးတဲ့ ရက်တွေလည်း ရှိပါ တယ်။ လာ မည့် ဇန်နဝါရီလ ၆-၇ ရက်တွေမှာတော့ ကချင်ပြည်နယ် ၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၊ […]
အဆိုတော် မနောဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အတော့်ကို အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အဆိုတော်တ စ်ေ ယာက်ပါ… သူ့ရဲ့ ကျေးလက်သဘာဝကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ သီချင်းတွေဟာ ဆိုရင် တောရောမြို့ပါမကျန် အကုန်ကြိုက်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..ဒါ့အပြင် အလှူမင်္ဂလာပွဲတွေမှာလည်း မနောမပါရင် မပြီးဘူး လို့ ဆိုရမှာပါ… ဒီလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျော်ကြားတဲ့ မနောရဲ့ […]
အရမ်းကောင်းလို့မျှဝေလိုက်ပါတယ် အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ တွင်းတစ်တွင်းထဲ ခုန်ချလိုက်သလိုပဲ
အိမျထောငျပွုတယျဆိုတာ တှငျးတဈတှငျးထဲ ခုနျခလြိုကျသလိုပဲ။ ဒီတှငျးဟာ ဒုက်ခတှငျး မဖွဈနဖေို့လိုတယျ ။ တှငျးအတိမျအနကျကို မသိပဲ ရမျးသနျးခုနျခလြိုကျလို့ တှငျးအောကျခွရေောကျမှ အမှိုကျတှငျးဆိုသရေော … နကျရငျနကျသလောကျပွနျတကျရခကျသှားပွီ တှငျးထဲကအမှိုကျတှနေဲ့ နပေရေော့ တဈသကျလုံး …. တဈခြို့တှငျးတှကေ ဖွတျလြှောကျသှားရုံနဲ့ အနံ့သကျမကောငျးလို့ ကြျောသှားလို့ရတယျ ။ […]
ဟိုက်ဂျက်ကားလေးဖြင့်် ခရီးဝေးသွားတတ်သော မိတ်ဆွေများ သတိပြုရန်…
မြန်မာပြည်မှာ အသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ဟိုက်ဂျက်ဟုခေါ်သော အပေါ့စားကုန်တင်ယာဉ်ငယ်အကြောင်း သိထားသင့်သောအချက်များ လေ့လာနိုင်ရန်ဖြန့်ဝေခြင်းပါ အင်ဂျင်ပါဝါ ၆၆၀ စီစီ အင်ဂျင်ကိုဘေးစောင်းတည်ဆောက်ထားသောကြောင့် လည်ပတ်နှုံးအလွန်ကောင်းပါတယ်။ အပေါ့ဆွဲမှာဆိုင်ကယ်ကဲ့သို့သွက်ပါတယ် ကုန်ပါရင် (သိုမဟုတ်) လူများရင် ထင်သလို၊ လိုသလိုနင်းတိုင်း‌ မပါတော့ပါ။ အရှိန်ယူရပါမယ် ဝိတ်ပါရင်ကားကလူးပါတယ်၊ ထိန်းရလဲခက်ပါတယ်၊ စတုပ်တိုးသောအင်ဂျင်များသည်ခါလီမှာသာ ပြေးတာပါ။ ဝိတ်များရင်မနိုင်လို့နင်းရင်မတက်ဘူးခင်ဗျ ရှေ့ကားကိုကျော်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ […]
မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ၅၆နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကျင်းပ(ရုပ်သံ)….
မိုငျးဖုနျးဆရာတျော ဘဒ်ဒန်တ ဉာဏသံဝရရဲ့ သကျတျော ၅၆ နှဈပွညျ့ မှေးနေ့ ဝိဇာတ အခမျးအနားကို ဆရာတျော သီတငျးသုံးနတေဲ့ မိုငျးကကျြဂူရဲ့ အပွငျမှာ ကငျြးပပါ တယျ ဆရာတျောသီတငျးသုံးနတေဲ့ မိုငျးကကျြဂူ အပွငျဘကျ ၇ ထပျကြောငျးဆောငျ ထီးတငျခွငျးကိုလညျး ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ မိုငျးဖုနျးဆရာတျောဟာ ၂ဝ၁၈ခုနှဈ ဝါတှငျးကတညျးက […]
အားရပါးရ ငိုချလိုက်ပါ…ဘယ်သူ့မှ မပြောနဲ့ ပိုပြီးမျက်ရည်ကျအောင် လုပ်မယ့်သူပဲရှိတယ်…
မင်း ဝမ်းနည်းနေလား_? ခဏလောက် အားရပါးရ ငိုချပစ်လိုက်ပါ ဘယ်သူ့မှ ပြောမနေနဲ့ ပိုပြီးမျက်ရည်ကျအောင် လုပ်မယ့်သူပဲရှိတယ် …။ မင်း လူတွေကို မလိုအပ်ပဲ ရင်မဖွင့်မိစေနဲ့ တစ်ယောက်ထဲလဲ နေတတ်အောင် နေပါ …။ မင်း စိတ်ညစ်နေလား_? ငါ ဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပီး ကိုယ့်ဖာသာကို ပြန်ထိန်းပါ …။ […]
ဒီအိမ်မက်တွေ မက်ခဲ့ရင် မဖြစ်မနေ ထီ ထိုးပါ…
တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောကိန်း (5-1-2020 to 11-1-2020)
တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောကိန်း (5-1-2020 to 11-1-2020) တနင်္ဂနွေသားသမီး ဘဝအတွက် ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်ရမည့် အချိန်ကာလပါ ကံကြမ္မာကောင်းတွေ ပြန်လည်ဦးမော့လာပါပြီ ရပ်တန့် နေသောလုပ်ငန်းများ ပြန်လည် လည်ပတ်လာပါလိမ့်မည် မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းများထံမှလည်း အကူအညီကောင်းများ ရရှိပါလိမ့်မည် ​ခြေ​ထောက်​ မ​တော်​တဆ ထိခိုက်​မိတတ်​ပါသည်​ အချစ်​​ရေးတွင် […]